जीवनी हो ची मिन्ह (काका हो) - Taja Jankari
Taja Jankari Ultimate Website For Fresh And Useful Nepali Information.
जीवनी हो ची मिन्ह (काका हो)
हामी हजार वर्ष लड्यौ अझै हजार वर्ष लड्ने छौँ – का. हो ची मिन्ह (काका हो)
सन्दर्भ : १३० औं जन्मजयन्ती हो ची मिन्ह (काका हो)
क्रान्तिकारी हो ची मिन्ह एक सामन्य परिवारमा १९ मई १८९० मा भियतनामको ‘नुएन प्रान्तको किमलिन’ गाँउमा जन्मेका हुन् । काका हो उपनामले चिनिने हो ची मिन्ह मुख्य गरी दोस्रो विश्व युद्वपछि तथा भियतनाम युद्धको समयमा विश्वप्रसिद्ध नाम हो हो ची मिन्ह ! अझ संयुक्त राज्य अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी भियतनामी युद्धका नायक एवम् भियतनाम क्रान्ति र मुक्ति आन्दोलनका प्रेरकको रुपमा लिने गरिन्छ काका होलाई ।
काका होको व्यक्तित्व मार्क्सवादी, समाजवादी र क्रान्तिकारीहरुको मन मस्तिष्कमा छाप नै बनेर बसेको छ । काका होलाई भियतनामका मात्र होइन समग्र सामाज्यवाद विरोधी आन्दोलनका अगुवाको रुपमा चिनिने गरिन्छ । हो ची मिन्हको जन्म फ्रान्सेली विरोधी साम्राज्यवादी परिवारमा जन्मेका थिए र भियतनाममा भयङ्कर साम्राज्यवादी शोषणले ग्रस्त देश थियो, जहाँ देशको नक्शा बोक्नेहरूलाई देशद्रोहको सजाय दिइयो।
भियतनाम फ्रान्सको महत्वपूर्ण उपनिवेशको समय थियो । औपनिवेशका सामु गरिव भियतनामी निरीह थिए । आफ्नै जन्मभूमिमा अधिकार बिहीन थिए, अनि सुखि जीवनको आसा न्युन थियो । त्यसै समय परिवारको तेस्रो सन्तान र दोस्रो छोराको रुपमा ‘नुयन सिन कुन’ जसलाई पछि विश्वले हो ची मिन्ह भनी चिन्यो अर्थात् काका हो को जन्म भयो । काका हो भियतनामका ति गरिव दुःखीहरुको जीवन बदल्ने र देशलाई स्वतन्त्र बनाउने नायक बनेन्न सफल भए ।
काका हो ११ वर्षकै हुँदा काका हो कि आमाले अर्को सन्तान जन्माएपछि आमाको मृत्यु भयो । एक गरिव परिवारमा जन्मिएका काका हो सरकारी जागीर गर्ने बाबुका प्रोत्साहनका कारण शिक्षा पाउने अवसर पाए । त्यसैले काका हो चिनीया परम्परागत र फ्रान्सेली प्राविधिक दुवै शिक्षा लिएका थिए । उनका पिता पनि स्वतन्त्रताका पक्षधर थिए ।
त्यसैका कारण उनको जागिर खोसियो र उनलाई शारिरिक कष्टकर सजाए समेत दिइयो । काका हो ले बुबा लाई दिएको कष्टकर देखेका थिए । तर, अझै सानै थिए । त्यसबेला समय समयमा छिटफुट विद्रोहहरु र स्वस्फुर्त संघर्षहरु भएपनि फ्रान्सेलीहरु र भियतनामका सम्पन्न वर्ग ती आन्दोलनहरुलाई निर्ममता पूर्वक दमन गर्दथे ।
मुख्यगरी १९०८ को किसान विद्रोह यस्तैे क्रममा भएको थियो । उपनिवेश र शोषणको विरोध गर्दै प्रर्दशन भएको थियो । प्रदर्शनमा भएको दमनले युवा होची मिन्हको मस्तिष्कमा ठूलो चोट परेको थियो । त्यसको दोष कलेजमा पढ्दै गरेका २१ वर्षे हो ची मिन्हलाई पनि लाग्यो र उनी कलेज छोड्न वाध्य भए ।
यस अवसरमा विभिन्न महादेश घुम्ने मौका पाएँ । औपनिवेशको वर्वरता देखे । अफ्रिका, युरोप र उत्तर र दक्षीण अमेरिका पुगे । उनले संयुक्त राज्यमा स्वतन्त्रता पनि देखे । त्यसपछि काका हो युरोप पुगे । काका हो सोभियत क्रान्तिको समय लण्डनमा थिए । त्यसपछि फ्रान्समा पुगी फेरी मजदुरीमा संलग्न भए । त्यही उनी क्रान्तिकारी बनी निस्किए ।
क्रान्तिको शुरुवात :
दक्षिण पूर्वी एसियाको एक सानो देश भियतनामको स्वतन्त्रताको निम्ति भियतनामी जनताले पहिले फ्रान्सेली साम्राज्यवादसँग र पछि अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लगभग ५० वर्ष लड्नु पर्यो । काका हो १९१७ देखि १९२३ सम्म फ्रान्समा रहे । काका होले फ्रान्स, अमेरिका र इनलाण्डका तीन देशहरूमा आफ्नो आँखाले जताततै साम्राज्यवादी शोषण देखेका थिए । सन् १९१७ को रूसी क्रान्ति (अक्टोबर क्रान्ति) ले काका होलाई आकर्षित गरेको थियो । काका हो सोभियत क्रान्तिबाट निकै प्रभावित भए ।
काका हो देशको स्वतन्त्रता र क्रान्तिका लागि अघि सरे । काका होले सन् १९१७ मा फ्रान्समा रहेका भियनतामीहरुलाई संगठित गर्दै प्रथम विश्व युद्ध अन्त्य गर्ने भर्सेल्स शान्ती सम्मेलनमा ८ बुँदे माग अघि सारे र इन्डो-चाइनालाई समान अधिकार दिने माग राखे । काका होको मागको सुनुवाई नभए पनि यसले उनलाई सम्पूर्ण भियतनामी समक्ष चिनाउने कार्य गर्‍यो । हो ची मिन्हको भनाइ भियतनामी मुक्ति संग्राम विश्व मुक्ति संग्रामको एक हिस्सा हो र मेरो जीवन विश्व क्रान्तिमा समर्पित छ।
मार्क्सवाद र लेनिनवादको गहन अध्ययन गरे र फ्रान्सेली कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य भए । यस कम्युनिष्ट पार्टीको सहयोगमा हो ची ले एक क्रान्तिकारी पत्रिका “ले पेरिया” शुरू गरे । यसको सम्पूर्ण उपनिवेशमा शोषित जनतालाई फ्रान्सेली साम्राज्यवादका विरुद्ध विद्रोह गर्न प्रोत्साहित गर्‍यो। सोभियत क्रान्तिको सफलतापछि काका हो सन् १९२० मा फ्रान्सेली कम्युनिष्ट पार्टीको एक संस्थापक बने ।
काका हो सन् १९२३ मा सोभियत पुगे र ‘कम्युनिष्ट इन्टरनेशनलको’ पाँचौ सम्मेलनमा भाग लिए । त्यहाँ उनले सन् १९२५ मा स्टालिनलाई भेटे। काका हो लाई ‘कम्युनिष्ट इन्टरनेसनल’ ले चीनमा क्रान्तिकारीहरुको संगठन र भारतमा राष्ट्रिय मुक्ति संग्राममा पठाएको थियो। सन् १९२५ मा ‘कम्युनिष्ट इन्टरनेसनल’ को रायमा हिन्दुचेनका सबै कम्युनिष्टहरु हिन्दुचेन को कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्न र १९३३ मा भियतनाम नामको संयुक्त मोर्चाको गठन गरे।
काका होका झण्डै ९ वर्ष :
त्यसपछिका ९ वर्ष उनी कहाँ गए र उनले के के गरे न त सम्पूर्ण विवरण छ न त उनले गरेका क्रियाकलापको किन गरे भन्ने व्याख्या । कतिपयका लागि उनी थाइल्याण्डमा भिक्षु बनेर शिक्षा दिएका थिए र अन्यका लागि माओ र स्टालिनसँग बैठक गर्दै थिए । उनी हराएको र मरेको समेत हल्ला चल्यो । तर, उनी गुरिल्ला संघर्षको तयारीमा थिए । काका हो १९४१ जनवरीमा ३० वर्षको प्रवासपछि भियतनाम फर्के र फर्कने बित्तिकै उनले आन्दोलनको नेतृत्व आफ्नै हातमा लिए । उनले एक प्रचारसेना र एक राजनैतिक सेना बनाउन जरुरी देखे । काका हाेले पहिलो कुरा किसानसँग संवाद र सम्पर्क गर्ने गरे ।
त्यतिबेला ९० प्रतिशत भियतनामी किसान थिए । उनले आफ्नो समुहको न्युकियस बनाउन थाले । उनले युवाका साथै विभिन्न राष्ट्रवादी संगठनलाई आवद्ध गर्दै गए । पार्टीको अखबार सुरु भयो, जसको नाम भियत लैप (स्वतन्त्र भियतनाम) राखियो । सन् १९४१ को अन्तसम्ममा काओ वांग क्षेत्रमा कम्युनिष्टहरूले निकै आधार क्षेत्रहरू कायम गरे । काका होले गुरिल्ला दाउपेच, रुसमा गुरिल्ला युद्धको अनुभव र चीनमा गुरिल्ला युद्धको अनुभव नामका पुस्तकहरू लेखे ।
काका हो कम्युनिष्ट आन्दोलन र सन् १९४५ सम्म भारतीय चीनको छापामार युद्धको सक्रिय नेता थिए । लामो अभियान र जापान विरोधी विरोधीमा पनि उपस्थित थिए । यस संघर्षमा काका होले धेरै यातना भोग्नु परेको थियो। चियांग काई-शेक को सेनाले उनीहरूलाई पक्राउ गर्यो । काका होले आफनो जीवनमा १४ महिना जेलमा मात्र बिताएनन् निकै कष्टकर जीवन बिताए । उनी रोगको शिकार बने । र, बाच्ने आशा कम भएपछि उनलाई भियतनामको सीमामा छोडियो ।
जापानको हार र स्वतन्त्रता :
काका हो बाँचेर भियतनाम पुगे । त्यसपछि उनलाई लाग्यो जापानको दुश्मन संम्युक्त राज्य अमेरिकाले भियतनामको स्वतन्त्रतामा सहयोग गर्ने छ । काका होको यो चाहनामा सिआइएको रुची भयो । काका होसंग संयुक्त राज्य अमेरिकाले केहि समय नजिकको सहकार्य भयो । तर, उसको गिद्दे नजर पनि भियतनामाथि पर्दै गयो । दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको हार भएपछि भियतनामीको विजय भयो । उनीहरुले उत्तरी भियतनाममा विशाल जनप्रदर्शन गरी स्वतन्त्रताको विजय उल्साह भनाए । तर ब्रिटिश र अमेरिकीहरु त्यहीँ रहिरहे ।
हो ची मिन्ह्रले भियतनामको राजधानी हनोइमा ५ लाख जनताको विशाल र्‍यालीलाई संबोधन गर्दै भियतनाम गणतन्त्र भएको घोषणा गरे । त्यसबेला उहाँले घुँडामा टालेको खाकी रङको पाइन्ट लगाउनु भएको थियो । सन् १९५१ मा भियतनाम वर्कर्स पार्टीलाई मार्क्सवादी सिद्धान्तमा पुन:गठन गर्नुभयो । पार्टी अधिवेशनले उहाँलाई अध्यक्ष छान्यो र उहाँ राष्ट्रपति बन्नुभयो ।
फ्रान्सेली साम्राज्यवादीहरूले बेलायती साम्राज्यवादहरूको सहयोगमा इन्दोकिनाको पुरानो सम्राट बाउ दाई को ओट लगाएर साम्राज्य फेरि फिर्ता लिन प्रयास गरे। एउटा कडा लडाईको दौर शुरू भयो र सन् १९४६ देखि सन् १९५४ सम्म निरन्तर राष्ट्रियताको संघर्ष चलिरह्यो । संयुक्त राज्यको सहयोगको बावजुत सन् १९५४ मा फ्रान्सले हार स्वीकार गर्न बाध्य भयो । त्यसपछि जेनेभा सम्मेलन कल स्वीकार गरियो। सोही वर्ष हो-ची मिन्हलाई भियतनामी जन गणतन्त्रको राष्ट्रपति नियुक्त गरियो।
शीतयुद्ध युद्ध :
१ नोभेम्बर १९५५ देखि ३० अप्रिल १९७५ शीतयुद्धको दौडान भियतनाम, लाओस र कम्बोडियाको माटोमा लडाईएको भयंकर युद्धको नाम हो। यो युद्ध इण्डोचिनाको पहिलो लडाई उत्तर भियतनाम (कम्युनिष्ट मित्रहरू द्वारा समर्थित) र दक्षिण भियतनाम सरकार (संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य कम्युनिष्ट विरोधी देशहरू द्वारा समर्थित) बीच लडे पछि शुरू भयो। यसलाई दोस्रो भारतीय युद्ध पनि भनिन्छ। शीतयुद्धको समयमा यसलाई कम्युनिष्ट र उत्तरपश्चात विचारधारा बीचको प्रतीकात्मक युद्धको रूपमा लिइन्छ।
दोस्रो विश्वयुद्ध पछि संयुक्त राज्य र सोभियत रूस बीच तनाव को राज्य शीत युद्ध भनेर चिनिन्छ। यसलाई केही इतिहासकारहरूले हतियारको सामना गर्नु पर्ने शान्ति को नाम पनि दिएका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धको दौडान संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र रसियाले एक्सिस, जर्मनी, इटाली र जापानको बिरूद्ध काँधमा काँध मिलाएर लडे। तर युद्ध समाप्त हुने बित्तिकै एकातिर बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका र अर्कोतर्फ सोभियत संघ बीच तीब्र मतभेद हुन थाल्यो। रसियाको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट देशहरू र अमेरिकाको नेतृत्वमा पूँजीवादी देशहरू दुईवटा क्याम्पमा विभाजित भए। दुबै पक्ष कहिल्यै एकसाथ आपसमा झगडा गरेनन्, तर यी दुई समूहले यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न जारी राखे कि युद्धको खतरा सँधै देखिन्थ्यो।
बर्लिन सर्निकट, कोरिया युद्ध, सोभियत रूसले आणविक परीक्षण, सैन्य संगठन, भारतीय चीनको समस्या, यु -२ प्लेन काण्ड, क्युवाली मिसाइल सङ्कट जस्ता केही परिस्थितिहरूले शीत युद्दको आगो सल्काए। सन् १९९१ मा सोभियत रूसको विघटनसँगै यसको शक्ति घटाइयो र शीतयुद्धको अन्त्य भयो।
अमेरिकी सामाज्यबादको भियतनाम आक्रमण :
फ्रान्सेलीहरू पछि हटेपछि अमेरिकीहरूले बाओ दाइ नाम गरेको राष्ट्रपतिद्वारा दक्षिणी भियतनामको भियतनाम दिन येम लाई आक्रमण गरे र भियतनाम देशभक्तहरूको बिरूद्ध युद्ध लडे। युद्धको प्रगति भयो। विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली अमेरिकी साम्राज्यवादले दोस्रो विश्वयुद्धको दौडान यूरोपमा खस्किएको भन्दा दुई गुणा बम र विषालु ग्याँसहरू प्रयोग गर्‍यो।
करोडौं करोड भियतनामी मानिसहरूले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई पराजित गरे । सन् १९७५ मा अमेरिकी साम्राज्यवादीले हार खाएर फर्कियो । तर हो ची मिन्हले त्यो जित र दुई भियतनामको एकताको अभियान लिएरै मर्नुपर्‍यो । भियतनामको एकीकरण गर्ने उनको सपना आफ्नै आँखाले त देख्न पाएनन् तर साकार अवश्य भयो ।
काका होको मृत्युको अघिल्लो दिन, २ सेप्टेम्बर १९६९ मा हो ची मिन्हले आफ्ना मानिसहरूलाई टन्किन खाडीमा साम्राज्यवादीहरूलाई डुबाउन भने। हो ची मिन्हले साम्राज्यवादको जरा उखाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले । काका होले थुप्रै मार्क्सवादी रचनाहरु लेखे । काका होले साम्राज्यवाद विरोधी युद्धको अनुभव बटुले । काका होका रचनाहरुको अध्ययनले क्रान्तिकारीहरुलाई थप प्रेरणा दिएको छ ।
काका हो ले एक संघर्ष पूर्ण जीवन बिताएका थिए । अमेरिकीसँग लड्दा हजारौँ वीरहरुको ज्यान गयो । जनता, समाज र देशका लागि काम गर्दा गर्दै काका होको मृत्यु भयो । सन् १९६९ सेक्टेम्बर ३ मा ७९ वर्षको उमेरमा काका होको मृत्यु भएको थियो । हो ची मिन्हको पार्थिव शरिर अझै पनि हानोइको माउसोलिइमको केन्द्र हलमा चिस्याइ सुरक्षित राखिएको छ ।
महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन संक्षिप्त परिचय
अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस : एक इतिहास
सङ्घीयता र स्थानिय शासनको अवधारण ( नेपाल )
शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्द को जीवनी !
गायक छत्र शाही को नयाँ देउडा गित सार्बजनिक
स्टेफेन हकिङ महान वैज्ञानिक विज्ञानका एक योद्दा हुनु...
"नेपाली विद्यार्थीहरुको अन्यौलता" - Taja Jankari says:
Bank, Banking System & News
Breaking News | National, International
Culture, Festivals Information
Education | Pre-school, School, College, University
Entertainment | Celebrity Information
Health, Beauty, Food, Medicine, Ayurveda, Clinic, Hospital Information
History | National, International
Information Technology, Telecommunication, ISP Provider, Cable TV, DTH Information
Job, Vacancy | Career Making
Lok Sewa Aayog | Public Service Commission Information
Tribhuvan University | T.U.
Ultimate Website For Fresh And Useful Nepali Information.
Top Categories Select Category Automobiles Information (2) Bank, Banking System & News (3) Breaking News | National, International (25) Business (2) Culture, Festivals Information (3) Education | Pre-school, School, College, University (10) Entertainment | Celebrity Information (8) Health, Beauty, Food, Medicine, Ayurveda, Clinic, Hospital Information (6) History | National, International (7) How To Guide (6) Information Technology, Telecommunication, ISP Provider, Cable TV, DTH Information (5) Job, Vacancy | Career Making (2) Literature (9) Lok Sewa Aayog | Public Service Commission Information (11) Notice Board (6) Stock Exchange (1) Teacher Service Commission (1) Tribhuvan University | T.U. (9)
All Rights Reserved. Copyright © Taja Jankari